Ampitomboy ny fivezivezena amin'ny milina fikarohana
Nanatsara ny fifamoivoizana voajanahary 84% ve ny manam-pahaizana momba ny SEO?
Alahady, Desambra 27, 2009 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia voatosika hanao fikarohana rehefa nahatsikaritra an Manampahaizana SEO avoaka amin'ny tranokalan'ny orinasa hafa. ny Mpampianatra SEO ny fanontaniana dia manana bilaogy efa an-taonany maro noho ny ahy - koa te hahalala ny hampitaha ny statistikanay izahay. Manontany amin'ny mpanjifa maro momba ny fanatsarana ny motera fikarohana aho, saingy mbola tsy niantso ny tenako hoe manam-pahaizana.
Manova ny lohateny aho mifototra amin'ny fampitahana an'ity lehilahy ity… izay manana bilaogy SEO sy Marketing amin'ny Internet izay lava be noho izaho, miaraka amina orinasa mahafinaritra izay manana mpanjifa be dia be izay mety handany vola be izy.
Ny statistikan'ny manam-pahaizana
The SEO Expert tsy mitana ny laharana faha-1 amin'ny teny tokana mifaninana iray.
The Martech Zone laharana faha-1 ho an'ny teny fanalahidy 31 mifaninana.
The SEO Expert laharana ho an'ny teny lakile 19 amin'ny ankapobeny.
The Martech Zone mitana 741 ny teny lakile.
The SEO manam-pahaizana blog dia eo amin'ny 87,000 eo ho eo avy amin'i Alexa.
The Martech Zone laharana 47,000 avy amin'i Alexa.
Martech Zone mitohy hita ao amin'ny bilaogy marketing 100 ambony amin'ny Internet. Tsy ao anaty lisitra akory ny bilaogy Marketing an'ny manam-pahaizana SEO.
Raha ny marina, nanomboka ny orinasako manokana, ny fifamoivoizana amin'ny motera biolojika mankany Martech Zone dia nitombo 84%:
Ny bilaogy dia manintona voajanahary amin'ny motera fikarohana satria manome sehatra ahafahanao manoratra atiny matetika sy maneho azy ireo amin'ny fomba manatsara ny motera fikarohana sy ny index. Tsy misy miafina ireo teknika ampiasaiko… raha ny marina dia nosoratako tao amin'ny e-book daholo ireo. Mitoraka bilaogy ho an'ny SEO ary hivelatra amin'izany amin'ny boky havoaka amin'ny fahavaratra manaraka.
Raha mila fanampiana ianao amin'ny orinasan'ny Search Engine Optimization anao ny orinasa dia azonao atao ny miantso ny iray amin'ireo SEO manam-pahaizana… Na afaka manome ianao DK New Media antso… ilay orinasa izay nampitombo ny fifamoivoizan'ny Search Engine ho 84% nandritra izay 7 volana lasa izay. Safidinao io!
Ny lesona, mazava ho azy, dia ny 'matoky fa manamarina'. Satria ny manam-pahaizana milaza tena ho manana bilaogy, na orinasa na boky aza, dia tsy mahatonga azy ireo ho manam-pahaizana. Ny valiny dia mahatonga azy ireo ho manam-pahaizana!
Raha mila kopian'ny e-book maimaim-poana ianao dia misorata anarana amin'ny alàlan'ny RSS na mailaka fotsiny ary hahitanao rohy ao amin'ny lohateny fahana. Ity rohy ity dia hitondra anao mankany amin'ny pejy iray izay hipoitra rohy fampidinana.
Tags: seo consultantseo manam-pahaizanaseo valiny
Indraindray ny arintany marketing dia mamokatra diamondra
VelomaHootsuite, Salama indray Twitterfeed
Dec 28, 2009 amin'ny 6: 57 AM
Mendrika! Nahazo atiny tsara eto ianao.
Dec 28, 2009 amin'ny 8: 55 AM
Izaho koa dia 'sekoly taloha' toa an'i Douglas ary nandà tsy hiantso ny tenany ho manam-pahaizana hatrizay… mandra-pahitako ny zava-bitako sy ny valiko amin'ireo nantsoina hoe manam-pahaizana ary toa an'i Douglas no gaga tamin'ny valiny! Malalaka fa misy PR ary misy valiny… ary tsy miara-mandeha foana izy roa.
Dec 28, 2009 ao amin'ny 2: PM PM
Misaotra betsaka Ben! Ireo mpanoratra fanampiny dia tena nanampy an-taonina ny resaka eto amin'ny The Marketing Technology Blog!
Oscar, mety izany
Mety tonga ny fotoana hanombohana ny fanovana ny lohateny, Oscar! 😀
Jan 3, 2010 ao amin'ny 9: 02 AM
Mahagaga ny isan'ny olona any izay miantso ny tenany hoe manam-pahaizana momba ny SEO ary avy eo rehefa manangona ny angona momba ny tranokalany ianao dia tsy maintsy manontany ireo fanontaniana hoe aiza ny porofo fa manam-pahaizana SEO ianao?
Jan 8, 2010 ao amin'ny 8: 04 AM
Ahoana ny fampisehoana fitaovana iray na roa azon'ny mpanjifa ampiasaina aka Google Insights na Alexa ary sary fitifirin'ny mpivady hanamarinana ny isanao mba hahafahan'izy ireo manao toy izany koa rehefa mijery "manakarama" ny manam-pahaizana momba ny SEO manaraka azy ireo, ny developer data, sns.
Ampianaro tsara momba ny jono izy ireo hahafantarana ny trondro tsara toa anao.
PR vs siantifika zava-misy dia zavatra mahafinaritra tokony ampitaina amin'ny mpanjifa.